Mudaharaadyo ka socda Morooko - BBC News Somali
Mudaharaadyo ka socda Morooko
Image caption Caasimadda Rabaat ayaa ka mid ahayd magaalooyinka Morooko ee mudaharaadyadu ka dhaceen
Kumanaan qof oo reer Marooko ah ayaa dhawr magaalo oo dalka ku yaal ka dhigay dibad baxyo ka dib markii baabuur nooca xamuulka ahi jiidhay oo dilay nin kalluunka iibiya oo doonayay inuu kalluunka kala soo dego baabuurka oo boolisku qabteen.
Muxsin Fikri wuxu ku dhintay magaalada Al-Xusayma eek u taal woqooyiga maalintii Jimcihii waxaanay geeridiisu dhalisay cadho baahsan oo dadku kaga hadlayeen baraha internet ka ee bulshadu ku xidhiidho.
Geeridiisa ayaa lagala mid dhigay geeridii ninkii khudrad laha ahaa ee reer Tuunisiya ee 2012 kii noqotay dhimbiishii hurisay kacdoonkii Carabka.
Boqor Maxamad ka Morooko ayaa amar ku siiyay saraakiisha dowladda inay qoyska uu Fikri ka geeriyooday booqdaan oo u soo tacsiyeeyaan. Wasiirada arimaha caddaaladda iyo arimaha gudaha ayaa iyaguna wacad ku maray in dhacdadaa la baadhi doono.